Filtrer les éléments par date : vendredi, 25 février 2022
vendredi, 25 février 2022 18:39
Vatsy Tsinjo : Niverina indray ny fizaràna taorian’ny fiatoana kely noho ny fandalovan'ny rivodoza
Efa niverina nanomboka ny alakamisy 24 febroary ny fizaràna ny "Vatsy Tsinjo" tamin'ny Faritra maro manerana ny Nosy, rehefa niato andro vitsivitsy noho ny fandalovan'ny rivodoza EMNATI.
Ho an’ny teny amin'ny ANS Ampefiloha – Antananarivo dia tokantrano miisa 1 642 avy ao amin'ny Fokontany Anosimahavelona - Boriborintany Fahaefatra indray no nisitraka ireo fanampiana avy amin'ny Fitondram-panjakana ireo.
Tao amin’ny Fokontany Miandrarivo, Ambanidia ary Ambatoroka, ao amin’ny Boriborintany faharoa Antananarivo Renivohitra kosa dia tokantrano miisa 562 no nozaraina ireo Vatsy Tsinjo tamin’io andro io, izay notanterahina tao amin'ny Ex - Le Carré Miandrarivo.
vendredi, 25 février 2022 18:34
Tohana avy amin’ny Amerikana : Traboina 6 500 hafa indray no mahazo fanampiana, Tobim-pahasalamana 50 mahery no amboarina
Nitondra fanampiana fanampiny ho an’ny mponina miisa 6 500 any amin’ny faritra voadona mafy any Atsimo Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany ny governemanta amerikana, amin’ny alalan’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID).
Famatsiam-bola mitentina 300 000 dolara no nankinina amin’ny fikambanana tsy miankina CARE hananganana trano fonenana vonjimaika sy hanomezana rano fisotro madio, ary kojakoja ilaina ao an-tokantrano.
Fanampin’ilay fanampiana teo aloha nataon'ny governemanta amerikana ho an’ireo vahoaka miisa1 300 izay voatery nafindra toerana noho ny rivodoza Batsirai ity fanampiana ity.
vendredi, 25 février 2022 18:29
Besalampy : Tara ny famatsiana solika ny Jirama noho ny toetr’andro ratsy
Nampandre ny mpanjifa ny Jirama ao Besalampy, Faritra Melaky, fa manomboka androany 25 febroary dia amin’ny 6 Ora hariva ka hatramin’ny 12 Ora alina no mandeha ny jiro, izay miantoka ihany koa ny fampakarana ny rano eny amin’ny siniben-drano.
Noho ny haratsian'ny toetr’andro no voalaza fa antony, satria tsy afaka miainga any Mahajanga ireo botry sy sambo tokony hitondra ny solika mampihodina ny milina mpamokatra herinaratra ao an-toerana.
Amin’ny alina mampandeha ny jiro no manararaotra manangon-drano ny isa-tokantrano. Faritra mafana anefa iny.
vendredi, 25 février 2022 18:28
Anosizato Est II : Tovovavy iray tratra nivarotra rongony
Tovovavy iray, 28 taona, monina etsy Anosizato Est II – Antananarivo no nahatratraran’ny Polisy eny Ilanivato fonosana rongony niisa 12.
Voararan’ny lalàna ny fivarotana sy fifohana zavamahadomelina. Voasambotra ny alarobia 23 febroary ilay vehivavy, ary natolotra ny Fampanoavana ny alakamisy 24 febroary.
Notazomina am-ponja vonjimaika eny Antanimora io andro io izy, miandry ny fotoam-pitsarana azy.
FIZAFATO : Hanantanteraka fambolen-kazo
Hanatanteraka fambolen-kazo rahampitso sabotsy 26 febroary 2022, eny amin'ny kaominina Bongatsara, Distrikan'Atsimondrano ny fikambanan'ny zanak'ampelezan'ny faritany Toliara eto Antananarivo.
Natao izao hetsika izao mba ho fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'izao fiovaovan'ny toetrandro izao, no sady manomana sahady ny hiainan'ny taranaka aoriana ao.
Tsy hijanona eto Antananarivo ihany ity hetsika fambolen-kazo ataon'ny FIZAFATO ity, fa hitohy any amin'ny faritra ihany koa.
Zanakazo maherin'ny enina arivo no ho velona, misy karazany efatra io zanakazo io.
Miantso ny zanaky ny faritany Toliara rehetra, mba ho tonga amin'io rahampitso io, no sady fihaonana voalohany amin'ity taona vaovao ity hoy ny Filohan'ny FIZAFATO, ny Solombavam-bahoaka HENRI Jean Michel, no sady Kestora voalohany Antanimieram-pirenena.